အပတ်စဉ် အလုပ်သမားအစီအစဉ် (အမှတ် – ၀၃၅) Weekly Workers Programme No.035 | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား အလုပျသမား အစီအစဥျ အပတ်စဉ် အလုပ်သမားအစီအစဉ် (အမှတ် – ၀၃၅) Weekly Workers Programme No.035
MRTV WOKER PROGRAM 035 FOR WED by mcntvnews
မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် အလုပ်သမား ရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက အလုပ်သမားရေးရာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
A2 1. မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် 2016 ASEAN SKILLS COMPETITION အာဆီယံကျွမ်းကျင်မူပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံက သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် သတင်း
A3 2. ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေက ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ ပြည်တွင်းမှာ ကျွမ်းကျင်မူ စံသက်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်သမားတွေ နည်းပါးနေတဲ့အကြောင်း
A4 3. မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အများအပြား သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဇီကာဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကို စိုးရိမ် မလွန်ကြဖို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားလိုက်တဲ့ သတင်း
A5 စတဲ့ ပြည်တွင်းက အလုပ်သမားရေးရာ သတင်းတွေနဲ့အတူ၊ အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်း အစီအစဉ်တွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleအပတ်စဉ် အနုပညာအစီအစဉ် (အမှတ် – ၂၀၀) Weekly Entertainment Programme No.200
Next articleတောင်ငူမှာ မြေယာအမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မကျေနပ်လို့ လူ ၁၀၀ ဆန္ဒပြ
Weekly Worker Program
အပတ်စဉ် အလုပ်သမားရေးရာ အစီအစဉ် (Weekly Worker Program)